Koroonaavaayiras: Itoophiyaatti namootni 600 ol koronaavaayirasin walqabatee hordofamaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Koroonaavaayiras: Itoophiyaatti namootni 600 ol koronaavaayirasin walqabatee hordofamaa jiru
Namootni Chaayinaa fi biyyaalee Koroonaavaayiras itti mul'atee gara biyyaa dhufan 697 ogeeyyii fayyaatiin guyyoota 14'f hordofamaa akka jiran Institiyuutin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksiseera.
Namootni kunneen sakkatta'iinsa hoo'a qaamaa taasifameen mallattoon vaayirasichaa irratti kan hin argamne ta'us ragaan isaanii funaanamee guyyoota 14f guyya guyyaan hordofamaa akka jiran daayrektarri Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr Eebbaa Abaata miidiyaaletti himaniiru.
Ibsa idilee dhaabbatichi Koroonaavaayiras ilaalchisuun torbeetti al lama kennun hanga ammaatti namoota maloota adda addaan gara biyyattiitti seenan 250,000 siiqan irratti sakkatta'iinssi hoo'a qaamaa taasifamuun isaa himameera.
Buufata Xayyaara Idil-addunyaa Booletti qofa hanga ammaatti namoota 146,000 ol irratti sakkatta'iinsi hoo'a qaamaa taasifamuu Dr Eebbaan dubbataniiru.
Dhukkubni koronaavaayirasii barbaadama jeettii dhuunfaa dabale
Kunnen keessaa 3,900 kan ta'an biyyaalee vaayirasichi itti mul'ate irraa yemmuu dhufan kana keessaa 800 immoo lammiilee Chaayinaati jedhameera.
Gama biraatin institiyuutichi hanga ammaatti uummatarraa eeruwwan 60 keessummeessuu isaa fi isaan keessaa eeruwwan 58 qulquleeffachuu isaa fi kan hafan lama immoo yeroo dhiyootti kan kennaman ta'uu isaatin hordofamaa akka jiran DR Eebbaan dubbatan.
"Yeroo ammaatti namni vaayirasichaan shakkamee giddugala namootni foo'amanii itti turan keessa jiru hin jiru" jechuun miidiyaaletti kan himan Daayrektarri Institiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr Eebbaa Abaata sakkatta'iinsi naannoo daangaa biyyattiitti buufataalee 27 irratti taasifamu itti fufuu isaa himan.
Raabsi meeshaalee ittisaa fi leenjin hubannoo hawaasaa cimsuu ciminaan hojjetamaa akka jirus eeraniiru.
Dhaabbileen jeettii dhunfaa qaban lakkoosfi namoota dhuunfaan kireeffachuuf barbaadan dabaluulleen fedhii jiruu guutuu akka hindandeenye himan.